आठ मिनेटको सीनका लागि ५४ करोड भारु खर्च ! - Everest Dainik - News from Nepal
आठ मिनेटको सीनका लागि ५४ करोड भारु खर्च !
एजेन्सी । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर, कुरा यो यथार्थ हो । खबर हो एउटा चलचित्रको सीनको । भारतका एक अभिनेता चिरंजीवीले आफ्नो चलचित्र ‘सये रा नरसिम्हा रेड्डी’ मा आवश्यक एक सीन का लागि ५४ करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको छ । यो सीन मात्र ८ मिनेटको छ ।
याे पनि पढ्नुस साउथ इण्डियनका सुपरस्टार रामचरण ३३ वर्षमा प्रवेश
यो चलचित्रलाई चिरंजीवीका छोरा रामचरण तेजा प्रोड्यूस गरिरहेका छन् । सुपरस्टार चिरंजीवी यो समय सुरेद्र रेड्डीको निर्देशनमा पीरियड ड्रामा चलचित्र ‘सये रा नरसिम्हा रेड्डी’ को शूटिंङ गरिरहेका छन् ।
यो चलचित्रको बजेट २ सय करोड़ रुपैयाँ रहेको छ । त्यसमध्ये ५४ करोड रुपैयाँ एउटै सीनका लागि खर्च भएको छ ।रामचरणले एक अन्तवार्तामा आफ्नो चलचित्र सफल बनाउनका लागि आफूले खर्चको लोभ नगर्ने बताएका छन् । यो समय वार सीन को शूटिंङ चलिरहेको छ । यो सीन चलिचित्रको क्लाइमैक्स मा देखाइने बताइएको छ ।
ट्याग्स: Chrinjibi, ramcharan, सये रा नरसिम्हा रेड्डी